ASA FANENDAHANA : Jiolahy dimy saron’ny polisy, ny 3 naiditra am-ponja vonjimaika
Ny 06 febroary 2018 lasa teo, tokony ho tamin’ny 9 ora alina teny amin’ny Trano dimy akaikin’ny masera Ilanivato dia lehilahy roa no vaosambotry ny Polisin’ny PPA Ilanivato noho ny resaka fanendahana. 10 février 2019
Nahazo antso ny Polisy miasa ao amin’ny PPA Ilanivato fa « misy olona roalahy mampiahiahy eny an-toerana, mivezivezy sy mihodinkodina eo anelanelan’ny masera Ilanivato sy ny Trano dimy izy ireo ». Maizimaizina rahateo io toerana io. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny tompon’andrakitra ka tovolahy roa no voasambotra. Telolahy izy ireo no niaraka fa tafaporitsaka ny iray hafa raha vantany vao nahatazan-davitra ireo mpitandro filaminana.
Nandritra ny fisavana natao azy ireo no nahitana antsy iray lehibe fampiasan’izy ireo rehefa manendaka. Fantatra fa eny Anosipatrana sy eny amin’ny Trano dimy no toerana fanatanterahan’izy ireo ny asa ratsy, eo anelanelan’ny amin’ny 8ora sy 30mn ka hatramin’ny 09ora sy 30mn alina ny ora fanaovan’izy ireo izany. Lehilahy 3 hafa, ankoatr’ireo kosa no voasambotry ny Polisy ao amin’ny CSP 3 Antaninandro teny amin’i Mascar ny 06 febroary 2019 lasa teo tokony ho tamin’ny 10 ora sy sasany alina, mbola resaka fanendahana hatrany.
Fiaraha-miasa tamin’ny fokontany eny toerana no nahafantarana fa nisy andian-jatovo manendaka eo amin’ny fiatsonan’ny taksibe eo amin’ny Mascar rehefa manomboka amin’ny 8 ora sy amin’ny 10 ora alina ary efa maro ireo lasibatra tamin’izany. Nijery akaiky ny zava-nisy ny Polisy tao amin’ny CSP3 tamin’ny alalan’ny fisafoana iny toerana voalaza fa be mpanendaka iny. Vokany, tovolahy telo no tra-tehaka nihaodihaody teny. Ny roa tamin’izy ireo efa nigadra ary nivoaka ny fonja ny volana novambra taona 2017. Naiditra am-ponja vonjimaika moa izy 03 lahy ireto rehefa natolotra ny Fitsarana, omaly zoma 08 febroary 2019.